स्वास्थ्य – SagunKhabar
महिनावारीबाट यसरी थाहा पाउनुहोस् बाझोपन भए नभएको:सबैले एकचोटी पढ्नै पर्ने
श्रीमती महिनावारी हुँदा श्रीमानले के गर्ने ? हरेक पुरुषले पढ्नै पर्ने
तपाइको अनुहारमा दाग, धब्बा छ ? हटाउन अपनाउनुस् यी घरेलु उपाय:हेर्नुहोस
डण्डिफोर निचार्नु उचित कि अनुचित?
कसैलाई पनि आफू कुरुप देख्खिने इच्छा हुँदैन। तरपनि युवायुवतीहरू ऐना अगाडि उभ्भिन्छन् र यत्रो ठूलो डण्डिफोरले उसैलाई एकोहोरो हेरिरहेको देख्छन्। निचार्नुहुँदैन भनेर सबैले भनेको सुनेकै हो, तरपनि निचार्छन्, फुटाउँछन् अनि आँखा र छाला रातो…
जन्डिस उपचारका घरेलु उपाय
प्रारम्भिक रुपमा पहिचान गर्न सकेमा कतिपय अवस्थामा जन्डिसलाई घरमै उपचार गर्न सकिन्छ । जन्डिस उपचारका केही प्रमाणित घरेलु उपाय यस्ता छन् । गोलभेडाको जुसः एक चिम्टिी नुन र मरिचको धुलो मिसाएको एक गिलास गोलभेडाको जुस विहान खाली पेट खानुहोस् ।…
डण्डिफोर, दाग हटाएर केही दिनमै यसरी बनाउनुहोस् अनुहार चम्किलो! (विधिसहित)
काठमाडौं । अनुहार सुन्दर बनाउने जो कोहीको चाहना हुन्छ। तर पनि अनुहारमा आउने डण्डिफोर, दाग धब्बाका कारण नचाहादा नचाहादै अनुहारको सुन्दरता बिग्रन सक्छ। यदी तपाई पनि अनुहारमा आउने दाग धब्बा तथा डण्डिफोर हटाएर अनुहारमा सुन्दरता देख्न…
तपाई खानासँगै चटनी खानुहुन्छ ? हेर्नुहोस् यस्ता छन् चटनी खाँदा प्राप्त हुने अचुक औषधीय गुण
नेपालीले बिहान, बेलुकीको खानासँगै चटनीको प्रयोग गर्छन् । अधिकांशले चटनीलाई स्वादको लागि मात्र प्रयोग गरेको पाइन्छ । तर, चटनीले खानालाई स्वादिष्ट बनाउने मात्र काम गर्दैन । यसमा कैयौँ औषधीय गुण पनि हुन्छन् । स्वामी प्रकाशले चटनीको औषधीय…
चिनी खाँदा गुलियो, खाइसकेपछि बिषै बिष ! चिनी खानु नहुने यी हुन् १० कारण
काठमाण्डौ । तपाईलाइ मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदयघात आदि समस्या छैन भने त्यो पक्कै पनि सुखद समाचार हो । तर, आफू स्वस्थ छु भन्दैमा कुनै पनि प्रकारको गुलियो खानेकुरा खाने अनुमति छैन है । थप मात्रामा खाएको सुगर (गुलियो मात्रा) स्वास्थ्यका लागि…
छाला कालो, खस्रो हुनु विभिन्न किसिमका फोका, दाग, घाउ आउनुलाई छालाको समस्या वा रोग भनिन्छ । छालाको रंग चम्किलो खालको हुन्छ । स्वस्थ छाला र अस्वस्थ छाला राम्ररी चिन्न सकिन्छ । महिलामा छालाको विषेश महत्व हुन्छ । छालाले सुन्दरताले अत्यन्त…
यी हुन् मष्तिष्कलाई हानी पुर्‍याउने तत्व – थाहा पाउनुहोस् !अवस्य पढ्नुहोस
हाम्रो जीवनमा केही यस्ता हानीकारक तत्व जुन मष्तिष्कको लागि निक्कै क्षति पुर्‍याउने खालको हुन्छ। मष्तिष्क मानिसको सोच्‍न सक्‍ने महत्वपूर्ण भाग हो। मष्तष्कलाई हानी गर्ने त्तवहरु के के हुन् ? कीटनाशक औषधि: प्राय मानिसहरु धेरै फल फलाउनको…
तनावरहित वातावरणमा सेक्स गर्दा हुन्छन् यस्ता फाइदै फाइदा , जान्नुहोस्
एजेन्सी – तनाव कहीँ पनि राम्रो काम गर्दैन । तनावका कारण अन्य काममा त असर पुग्छ नै त्यस्तै असर देखिन्छ संभोगका क्रममा पनि । तनावले भरीएको वातावरण र समुयमा सेक्स गर्दा कुनै आनन्द नै हुँदैन ।चिकित्सकहरुका अनुसार तनाव भुलाउन सेक्स गर्ने होइन,…
कोदो खाँदा क्यान्सर, मुटुरोग र मधुमेहबाट पनि जोगाउँछ, यस्तो फाइदा:अवस्य पढ्नुहोस
कोदोलाई धेरैजसो मानिसले राम्रो अन्न मान्दैनन् । तिनीहरू यसको गुणमा होइन कि रंगमा गएकाले त्यस्तो भएको बुझ्न गाह्रो छैन । तर, कोदो तपाईंहामीले सोचेजस्तो कम गुणकारी खाद्यान्न भने हुँदै होइन । यसमा चामल र मकैभन्दा ३५ गुणा अनि गहुँभन्दा ८.७३…
बिहान ढिलासम्म सुत्नेहरुलाई लाग्छ यस्ता भयानक रोग:२ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोस
सुत्दा दिमाग तिखो हुन्छ भने शरिरमा दिनभरी काम गर्नका लागि ऊर्जावान् राख्छ । पर्याप्त निन्द्राले मोटोपना, मधुमेह, हृदय रोग र समयपूर्व मृत्युको सम्भावना निकै कम हुन्छ । कम सुत्दा शरिर र दिमागमा नकारात्मक असर पर्ने गर्दछ तर धेरै सुत्दा…